Icho chikomana! Akazvarwa paLufthansa ndege 543 kubva kuBotota kuenda kuFrankfurt
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » Icho chikomana! Akazvarwa paLufthansa ndege 543 kubva kuBotota kuenda kuFrankfurt
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bulgaria Kuputsa Nhau • Bhizinesi Kufamba • Colombia Breaking News • Germany Kuputsa Nhau • vanhu • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mukadzi ane makore makumi matatu nemasere anobva kuBulgaria akasununguka nemusi weChitatu kune mukomana mukomana paLufthansa ndege pamusoro peAtlantic Lufthansa nendege LH38 kubva kuBotota kuenda kuFrankfurt zvirokwazvo haina kuenda sezvanga zvichitarisirwa kune vashandi nevapfuuri vari mungarava.
Amai nemwana vari kuita zvakanaka. Iyo nguva yekuzvarwa pa12: 37 yaive yakajairwa - nzvimbo yekuzvarwa kwete kwete: Kukwira pamusoro peNorth Atlantic yaive 39,000 tsoka panguva iyoyo (anenge 11,800 49 metres) pane latitude ye21 degrees North, uye longitude ye XNUMX degrees Madokero.
Airbus A340-300 ine kunyoreswa D-AIFC (yakabhabhatidzwa sa "Gander / Halifax") yakasimuka kubva kuColombia guta guru Bogota musi wa25 Chikunguru nenguva dza 21:00 nguva yemuno ine vanhu gumi nevapfumbamwe 191 nevashandi gumi nevashanu vari muchikepe. Panguva yekubhururuka, mukadzi akatanga kusangana nemarwadzo ekuzvara nguva isati yakwana. Vashandi vakafambisa vafambi vakati wandei kunogara zvigaro kumberi, uye chikamu chekumashure chendege chakava kamuri yekuendesa isingatarisirwe. Nzvimbo yese yakavharwa neyakavanzika screen. Kuberekwa kwakaenderera pasina zvinetswa, zvichibatsirwa nenhengo dzevashandi vekamuri rembavha uye vanachiremba vatatu vakave varimo. Amai vatsva Desislava K. vakatenda timu yevabatsiri uye vakatumidza mwanakomana wavo Nikolai - zita rimwe chete seimwe yechiremba.
Kuisa amai nemwana wavo mukurapwa nekukurumidza sezvinobvira, kaputeni akafunga kumbomira muManchester, kwavakanomira nenguva dza13: 09 nguva yemuno, iye zvino nevatakuri 192 pakusvika. Kamwe amai nemwana pavakange vakachengetedzeka mumaoko evanochipatara, kaputeni akasimuka zvekare kuFrankfurt Airport. Iyi ndege inoshamisa yakazomhara muFrankfurt na 17:28 nguva yemuno.
“Handisati ndamboona zvakadaro mumakore angu makumi matatu nemapfumbamwe ehunyanzvi. Vashandi vese vakaita basa rinoshamisa. Uku kwaive kubatana kukuru, munhu wese achiita chikamu chake, ”akadaro Kurt Mayer, kaputeni wenhandare yendege LH37. Mushure mekumhara, ndakabva ndaenda kuna mai nemwana achangoberekwa kunomugamuchira pasirese. Kunze kwekuzvarwa kwemwanakomana wangu chaiye, iyi yaive nguva yekufamba zvakanyanya muhupenyu hwangu ”, akadaro Mayer.
“Pakazvarwa mwana, ndakaudza vamwe vafambi pamusoro pePassenger Address system. Vafambi vakaombera uye vaingofara kuti zvese zvafamba zvakanaka ”akadaro Carolin van Osch, Purser wendege. "Pachinzvimbo chevashandi, ndinoda kutenda vanachiremba vakabatsira kuita izvi, uye tinoshuvira mhuri zvese zvakanaka", vakadaro Mai van Osch.
Kuberekwa mubhodhi hakuwanzoitika. Uku kwave kuri kuzvarwa kwegumi nerimwe pane imwe ndege yeLufthansa kubvira 1965. Vashandi vekabhini vanogaro piwa dzidziso yekutanga yekubatsira, iyo inosanganisirawo matanho ekutanga nemirairo mukushandiswa kwemishonga yezviridzwa nemidziyo yekuzvara kunogona kuitika. Lufthansa inokurudzira kuti vakadzi vane nhumbu vataure nachiremba wavo nezvezvekuuya kwendege. Vakadzi vane nhumbu vane nyore kubata vanogona kubhururuka neLufthansa kusvika kupera kwevhiki rechimakumi matatu nematanhatu rekuzvitakura, asi kubva pavhiki rechimakumi maviri nemasere zvichienda mberi, zvinokurudzirwa kutakura chitupa chiripo kubva kuna chiremba wavo.